screen Great, design adag, keyboard cajiib iyo qaylo 3 sameeyaan jiilka saddexaad ThinkPad X1 Tablet isku darka awood
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “dib u eegis Lenovo Thinkpad X1 Tablet: sida ugu fiican ee Pro oogada laakiin USB-C” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo, theguardian.com 11 Thursday October 2018 06.00 UTC
Lenovo ee jiilka saddexaad Tablet X1 ThinkPad ay higsaneysaa in ay noqon a Windows no-tanaasul 10 fullaaci kara in siinayaa dadka isticmaala waxa Dhulka Microsoft ee maayo: USB-C iyo qaylo 3.
factor Foomka waa la yaqaan. computer dhabta ah waa la tuujiyaa gelin ah kiniin qaro weyn 8.9mm la kickstand soo baxay dhabarka iyo keyboard ah magnetically lifaaqan fadhiya ilaa xagal, waayo, makiinada wanaagsan.
Laakiin halkan Lenovo ka guuleystay oogada minimalist 2-in-1 formula ka tago, keeno qabatooyin ThinkPad sida ibta a fiiqaya, badhamada trackpad, furayaasha keyboard baaldi-qaabeeya iyo 4G optional wadada-dagaalyahan racfaan.
In aan dhaho waa Ronie daahir ah, laakiin shaqada Matt-madow rinjiga, logo iyo casaan xooga ThinkPad qadiimiga-raadinta dhab ahaanbaan u siinay aragti ah mishiinka ku saabsan tahay is alaabtii sameeyey.
Shaashadda 13Isla ka weyn tahay waxaad ka heli doontaa on the dusha Pro iyo Eve V, oo ka dhigaya in ay u fududahay in la isticmaalo Solo sida laptop ah. screen laftiisa waa pin-fiiqan, midabo iyo kaliya dhalaalaya ku filan oo ay dibadda ku isticmaalaan. Movies eegi weyn ku dul, la xaglo daawashada wanaagsan, iyo halka bezels ku wareegsan ka baxsan waa kuwo waaweyn, waxay meel labada guddoomiye ku hor jeeda, scanner faraha iyo a Windows Hello-Nidaamka aqoonsiga wejiga IR karti.
kickstand waa sida ugu fiican ee in Pro oogada iyo fog xalka ugu fiican fuliyeen ilaa loox fullaaci kara, midkood u gaar ah ama ku xiran keyboard ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
On dib waa kickstand adag-dareen leh xagal balaadhan oo ah dhaqdhaqaaq, waxa xaqa ah sida ugu fiican ee in on dambe ee Pro oogada ah, oo kaamil ah si loo helo xagasha midig dhabtaada ama miiska.
ku hadla afka hore u jeeda ayaa laga yaabaa in ay yihiin dhibic daciif ah isticmaalka Tablet X1 sida mashiinka warbaahinta a, maxaa yeelay, inkastoo ay yara cad iyo dhalanrog-free waa, waxay sidoo kale tahay ma aad u cod weyn oo ka maqan nooc kasta oo Bass. Waxay noqon doontaa wanaagsan haddii aad gacanta ku haya mishiinka si ay u daawadaan TV show a, laakiin daawashada wax halka karinta iyo maqalka waxa ka socda in ka badan marawaaxadda ah waa no-tago.
Tablet X1 ayaa waxaa loogu talagalay in ka badan raagaya badan ugu. screen waxaa daboolay warqad of bakhtiyo Glass, sida ugu badan ee tartanka, laakiin line ThinkPad uu leeyahay taariikh socday mile dheeraadka ah ee imtixaanka ka dhanka ah qoyaan, gariirka iyo shoog farsamo, taasoo la micno ah waa in la jolts maalin walba qabsadaan iyo jostles of musaafo.
Processor: Intel i5 Core Bawdada-core ama i7 (8Qarni th)
Kaydinta: 256, 512GB ama 1TB SSD
Nidaamka Operating: Windows 10 Home ama Pro
Camera: 8MP gadaal, 2Xildhibaan hore u jeeda
Xiriiriyaan: ac wifi, Bluetooth 4.1, 2x qaylo 3 (USB-C), headphones, TPM, microSD, aqoonsiga wejiga, scanner faraha, sim Nano optional iyo NFC
Cabirka: 304.1 x 226 x 8.9mm (15.1mm la keyboard)
Weight: 890g (1,270g leh keyboard)
High-dhamaadka waxqabadka ultraportable
The kiniin iyo keyboard wada dhaqso ah la magnet. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
taxane X waa line ThinkPad-dhamaadka sare Lenovo ee, taas oo macnaheedu yahay Tablet X1 wuxuu la iman doonaa xoog ay tahay badan tahay in ay rabto in aad dhan.
Taas waxaa ka mid ah doorashadaada ugu dambeeyay siddeedaad jiilka Bawdada-core i5 Intel ama processor i7, 8 ama 16GB ee RAM iyo biyo badan kaydinta.
Mashiinka sida baari lahaa processor Intel Core i7-8550U, 16GB ee RAM, 512GB of kaydinta iyo 4G, oo gabi ahaanba duulay iyada oo wax walba oo aan ku tuuray waxa at.
Inkasta oo isku dhafan Intel UHD 620 kaarka muuqaallo kale waxaa laga yaabaa in meesha ugu liita ee Tablet X1 ah, mishiinka u suurtagashay in ay la tacaalaan qaar ka weyn 23,000-pixel images ballaaran oo aan aad u badan oo dhididka a jabiyay.
Taageerayaasha in kiniinka ilaa dab inta badan u tartameen qaar ka mid ah, laakiin waxay sidoo kale ma heli gaar ahaan cod weyn oo aad samaynaysid haddii wax processor-degdeg ah oo aad u. Inta badan waxay tahay galayey deegaanka xafiis.
waxqabadka guud ahaan waa fiican, tallaabadaas in mashiinka ultraportable-dhamaadka sare ah, laakiin ma filan in la sameeyo ciyaaraha qoon gaystay waxa on - ma aanan isku day la kaarka naqshadeynta dibadda.
madow Matt The egtahay wax yar ka caajis, laakiin waxa uu dareensan yahay sida iska caabin doonaa xagashada iyo sidoo luuda. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Mid ka mid ah waxyaalaha uu ku allabaryi jiray oo kiniin ah PC ugu waa nolosha batteriga. Lenovo xigtay nolosha batteriga "dheeraad ah oo ku-badan-maalinta oo dhan" saacadaha sagaal iyo bar-a, laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay Tablet X1 ThinkPad ku socdaa oo kaliya ku dhawaad ​​toddoba saacadood u dhexeeya eedeeyay. In la "nolosha batteriga Better" awoodda dejinta firfircoon ahaa, processing hadalkiisii ​​ku Typora, dhirta ee Chrome, iyadoo la isticmaalayo akhristaha Series, qaar ka mid ah tafatirka image xididnaa Photo oo badan oo email in Microsoft Mail.
Waxaa ku filan si aad u hesho iyada oo inta badan maalin shaqo, laakiin kuma filna in uu ka tago xeedho guriga on maalmood oo degdeg ah. Nasiib wanaag sidii ay isticmaasho USB Delivery Power xukumaya, wax xeedho USB-C leh ereeya ku filan waa in ka shaqeeyaan sida kuwa geeyey la laptops kale ama xataa multi-saxan deminta 30W ama ka badan.
qaylo 3 dekedaha
laba qaylo 3 dekedaha, Kensington Afyare qufulka iyo saxaarad sim jira oo dhan ee hal dhinac. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Tablet X1 ayaa ku soo beegmay iyada oo kaliya labo qaylo 3 dekedaha in laab sida dekadaha USB-C. Lahaanshaha qaylo 3 waa boon weyn sida awoodaha ballaarinta waa dhammaadka lahayn, oo ay ku jiraan gashtay quduuska ah ee ka mid ah xudunta xukumaya, xirmaan 4K monitor iyo durugsan kale kasta oo aad ka xusuusan karto. Waa faa'ido weyn u tartameen in ka maqan xataa USB-C.
Si kastaba ha ahaatee, isagoo dekedaha laba kaliya, mid ka mid ah oo loo baahan yahay awoodda, macnaheedu waa in aad ku tiirsan doonaa guraan ama xarumaha. Ma ahan sida heshiis weyn ugu, laakiin xoogaa dekedda-halmar isla waa lama huraan haddii aanad maalgashadaan dekedda ah ee sort qaar ka mid ah.
Waxa kale oo jira akhristaha kaarka microSD a, oo waa weyn, laakiin waxa uu ku qarsoon a-Afyare sim la mid ah wixii aad ka heli lahayd on smartphone a. Ma ahan wax ku ool ah sida akhriste kaadhka xusuusta kulul-swappable sida aad u baahan tahay qalab ejector sim ah si aad u hesho baxay, oo waxay ka dhigan tahay maahan kuwo sim 4G haddii aad heysato mid ka mid waqti isku mid ah.
keyboard waa heer sare, oo ka wanaagsan laptops ugu. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Si ka duwan Microsoft ee oogada Pro, Tablet X1 wuxuu la iman doonaa keyboard a, iyo waxa a keyboard waa. Windows 10 detachables sida this nool ama ku dhiman tayada teebabka ah, sida inta badan ay isticmaali sida laptop ah.
keyboard Lenovo waa ugu fiican ee aan ku isticmaalo on kasta fullaaci kara, oo ka wanaagsan tirada ugu badan ee laptops. furaha ah waxaa ka buuxa xajmi-, adag, dareemi weyn ka hoos farahaaga oo ay safarka ku filan si ay u sameeyaan, waayo, raaxo ah, waayo-aragnimo makiinada dheregto.
trackpad waa siman wanaagsan. Waa quruxsan weyn, ayaa siman a, dusha saxda ah iyo click adag tahay in la, iyo sidoo kale fursado badan si ay u Customize waayo-aragnimo ah. Laakiin waxaa sidoo kale sameesay ThinkPad ah ee foomka of TrackPoint yar oo cas ibta naaska u dhaxeeya G, H iyo B furayaasha, iyo saddex badhamada mouse dhexeeya spacebar iyo trackpad ah. Waxaan helay isticmaalka yar iyaga u marka laga reebo on tareen meesha dhamaadka keyboard la tuujiyey aan mindhicirka by legroom eber ku xanibeen trackpad ah.
keyboard ma leeyihiin quirks ay, sida muhiimka ah FN ee hoose ka tagay geeska halkii Ctrl, si degdeg ah wax Waxaan u lahaa in ku dhawaad ​​beddelato wareega goobaha for cut muruq-xusuusta iyo Jinka. Ma jiraan wax Furayaalkiisu warbaahinta midkood.
scanner faraha waxa uu leeyahay waxoogaa go'an cajiib ah ilaa, laakiin ka shaqeeya iyo sidoo kale marka aadan rabin in ay isticmaalaan nidaamka aqoonsiga wejiga. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Tablet X1 waxay leedahay nidaam aqoonsi ah IR-ku salaysan wejiga in kaliya sida ugu fiican in on line oogada Microsoft ee. Waxay kuu aqoonsan ka qufulka-screen oo si toos ah aad abuse in, samaynta xuduud lahayn login.
Waxa kale oo jira scanner faraha a, taas oo uu leeyahay isku darka wax yar kisi ah laga faaiidaysanayo iyo kabacdi for diiwaangelinta faraha, laakiin ka shaqeeya iyo sidoo kale hawlgal maalin-ka-maalin. Anigu ma aan aakhirka isticmaalkiisa miiska sida aqoonsiga wejiga shaqeeyay si fiican u, laakiin waxa uu u faa'iido badan ee la furayay kiniinka markii Xararad Jihaynta sawirka, iyo fursadaha ka badan calaamadaha jismiyeed u wanaagsan.
Si aad u soo jeedin on Tablet X1 ka furan keyboard aad u leeyihiin in ay ku dhuftey button awoodda ama riix furaha FN on keyboard ah
Waxaad ka heli doorasho ee Windows 10 Home ama Pro
The optional ThinkPad Pen clips Pro galay dhinaca mishiinka la haystaha ah fullaaci kara oo ka shaqeeya iyo sidoo kale, waayo, sixitaanka ama saxiixa waraaqaha
The app Lenovo nuqdad qaadataa daryeelka of updates iyo goobaha darawalka bespoke in Tablet X1 la buunbuuninayo yar
The jiilka saddexaad Lenovo ThinkPad X1 Tablet bilaabantaa £ 1.480 la processor Core i5 a, 8GB ee RAM, 256GB of kaydinta iyo keyboard iyo dushiisa ka £ 2.422 la kala dooran karo oo dhan.
Mashiinka sida tijaabiyey kacaysaa £ 1,973.59 la processor Core i7 a, 16GB ee RAM, 512GB of kaydinta iyo 4G.
Wixii la barbardhigo, Microsoft ee oogada Pro 6 bilaabantaa £ 879, nadaam la mid jaban in Tablet X1 ah.
Tablet X1 ThinkPad The xaqiijinayaa in Lenovo ka dhigi kartaa fullaaci kara 2-in-1 Windows weyn 10 computer kaniini. Ma ahan raqiis ah, laakiin waxay bixisaa caddaymaha la mid ah ama ka fiican tahay in ay madax horjeeda oogada Microsoft ee Pro, oo ay ku jiraan doorashada ee aadka loogu baahan yahay casri ah dekedda cadaab daran 3.
Tablet X1 ayaa dareensan sida ay qaadan karto garaaca ah oo ku noolaan doonaa maraan shaqada mobile, taas oo ah waxa loogu talagalay. screen waa weyn yahay, iyo 13Isla waa size kahyraadka, ka kickstand iyo keyboard waa cajiib iyo waxqabadka waa top-uruursanayey.
The nolosha batteriga toddoba saac ayaa laga yaabaa inuu ka fiican, laakiin 4G ku dhafan iyo laba fursadaha jismiyeed waa daro soo dhaweyn. Waxaa weli mashiinka wanaagsan shaqada ka badan play, laakiin waxaa inoo wanaagsan oo ku filan si ay u soo jiid waajib double haddii oo dhan aad rabto in aad samayso waa watch videos ka dhanka qolka.
Haddii aad tahay suuqa for a top-dhamaadka 2-in-1 Windows 10 fullaaci kara, Tablet ku X1 Lenovo ThinkPad waa in aad liiska.
Iidooyinka: dhismaha adag, screen wanaagsan, keyboard cajiib ah, qaylo 3, 4G optional, akhristaha kaarka microSD, scanner faraha, aqoonsiga wejiga
Arrrimaha: kaliya labo dekedaha USB-C, microSD akhristaha kaarka aan si fudud loo heli, qaali
dhibic guduudan oo ku saabsan 'i' glows marka mishiinka waa in heegan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Oogada Microsoft Go dib u eegis: kiniin in u fiican tahay shaqada badan play
iPhone X: New Apple casriga ah dadaweynaha Button Home f ...
← Google bilaabay Pixel 3 Casriga ah iyo Pixel Suuliyada Tablet Amazon oo bilowday biyo u adkaysta shidin Paperwhite →